Real Madrid oo xagaagan 280 milyan oo Euro ku soo qaadanaysa Kylian Mbappé –France Football – Gool FM
Real Madrid oo xagaagan 280 milyan oo Euro ku soo qaadanaysa Kylian Mbappé –France Football
Haaruun March 28, 2019
(Paris) 28 Maarso 2019. Sida ay soo ogaatay jariidadda ‘France Football’ waxaa kooxda Real Madrid ee waddanka Spain ay qorsheyneysaa in ay xagaagani 280 milyan oo Euro ay ku soo iibsato laacibka da’da yar ee kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska Kylian Mbappé.
Jean Le Bail, oo ah Joornaaliiste ku takhasusay su’aalaha dhanka dhaqaalaha ayaa warbixintani ka dhawaajiyay, isagoo xusay in Real Madrid ay toddobaadkan si weyn u muujisay rabitaankeeda ku aaddan weeraryahanka Faransiiska.
Mbappé oo xulka Faransiiska u horseeday Koobkii Adduunka 2018 ayaa waxa uu muddo dheer ahaa mid ay si weyn u dooneysay Real Madrid, isagoo xilli ciyaareedkanna 35 kulan oo uu PSG u ciyaaray u dhaliyay 31 gool.
Wargeyska ‘Le Parisien’ ayaa isna saakay xaqiijiyay in Real Madrid ay kalsooni weyn ku qabto in ay soo iibsan karto Mbappé qiimihii la doono ha ku qaadatee.
Qiimeyn kale oo uu sameeyay wargeyska ‘AS’ ee Spanish-ka ka soo baxa ayaa isna waxaa 200,000 oo qof ay garteen 89% in Mbappé uu ku haboon yahay inuu ku soo biiro Real Madrid.
DEG DEG: Solskjaer oo si Rasmi ah loogu magacaabay Tababaraha Man United....(Imise Sano ayuu saxiixay?)
Madaxweyne ku xigeenka Barcelona ee Jordi Mestre oo ka hadlay suurtagalnimada ay ku heli karaan Griezmann